Inter Milan oo bedelka Mauro Icardi ka dhex aragta kooxda Manchester United… (Waa kee Weeraryahanka ay qaadanayso?) – Gool FM
Inter Milan oo bedelka Mauro Icardi ka dhex aragta kooxda Manchester United… (Waa kee Weeraryahanka ay qaadanayso?)
(Milano) 15 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa soo qaadan doonta Weeraryahanka naadiga Manchester United ee Romelu Lukaku haddii uu Mauro Icardi kooxda ka tago suuqa xagaaga sida wararku ay sheegayaan.
Icardi ayaa doonaya inuu soo gabagabeeyo heshiiska uu ku joogo kooxda Inter Milan kaddib markii laga xayuubiyey xilka Kabtannimo ee naadiga.
25-sano jirkaan ayaa bartilmaameed u ahaa kooxaha Real Madrid, Atletico Madrid iyo Chelsea, waxaana la wariyey inuu iska diiday inuu u ciyaaro kooxda Inter Milan, iyadoo haatan la filayo inuu ka dhaqaaqo naadiga dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Warsidaha Tuttomercarto ayaa warinaya in Naadiga Nerazzurri ay qorsheysatay inay la soo saxiixato bedelkiisa, waxaana ay u aragtaa dhaliyaha kooxda Manchester United ee Lukaku.
Lukaku ayaan helin waqti badan oo uu ku ciyaaro inta uu naadiga Man Utd macallinka u yahay Ole Gunnar Solskjaer, waxaana inta uu Ole la wareegay shaqada kooxda ka dhisan Old Traffrod uu Lukaku ku soo bilowday kaliya labo kulan 12 ciyaarood oo uu safka hore ku bilaaban karay.
In uusan waqti badan oo uu ku ciyaaro haysan ayaa xiddiga xulka qaranka Belgium ku riixaysa inay uu baxo, labo sanadood kaddib markii uu Everton kaga yimid 75 milyan oo gini, Inter ayaana ka fiirsan doonta inay kula soo saxiixdaan Lukaku qiime kaas la mid ah, haddii ay iska gadaan Icardi.
Tababare Solskjaer ayaa Lukaku ka door-bidaya xiddiga da’da yar ee Marcus Rashford labadii bilood ee la soo dhaafay, xiddiga reer England ayaana lix gool dhaliyey siddeed kulan oo uu horyaalka u ciyaaray Man United tan iyo markii uu shaqada la wareegay macallin Ole.
RASMI: Ciyaaryahanka ku guuleystay abaal-marinta Xiddiga bisha Janaayo ee horyaalka Bundesliga oo la shaaciyey
Ernesto Valverde oo ka hadlay heshiiska cusub uu u saxiixay kooxdiisa Barcelona